बिजुली बक्स स्लट मिसिन पान्डा Pow सफल चलचित्र मताधिकार कङ फु पान्डा प्रेरित छ. यो एक क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस भिडियो स्लट खेलाडी विभिन्न आश्चर्य प्रदान. स्पष्ट, खेल चिनियाँ सौंदर्य विशेषताहरु. नेत्रहीन हुनुको अपिल साथ, यो पनि एकदम धेरै खेल्न सरल छ. खेल जो यो एकदम शुरुआती लागि उपयुक्त बनाउँछ एकदम आषा छ. खेलाडी खेल भर सानो तर बारम्बार WINS संग पुरस्कृत गर्दै.
पान्डा Pow को विकासकर्ता बारेमा:
चट्याङ बक्स खेल को संस्थापक भन्दा साथ सुसज्जित 20 गणित मा एक ध्यान संग खेल डिजाइन मा अनुभव को वर्ष. मा 2004 तिनीहरूले आफ्नै स्टुडियो संग आए र गेमिङ उद्योग गर्न स्लट आपूर्ति सुरु. यो क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस खेल आफ्नो नवीनतम भेटी छ.
यो क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस खेल मन्दिर र पूर्वी थिम्ड गहने भरिएको कि रातो रंग पृष्ठभूमि छ. खेल विकासकर्ताहरूले को नजर साँच्चै अन्य Orient THEMED खेल उपलब्ध अनलाइन विपरीत सरल राखिएको छ, जो यो थप attainable बनाउँछ. ग्राफिक्स पनि extraordinarily सहज र एकै समयमा सशक्त जो धेरै सुखद गेमिङ अनुभव प्रदान गर्दछ छन्. त्यहाँ पाँच रील र तीन पङ्क्ति छन् 25 स्थिर paylines. तपाईं पनि तपाईं फेरि र फेरि उही शर्त गर्न अनुमति दिन्छ एक ओटो प्ले खेल मोड पाउनुहुनेछ. को रील मा प्रतीक सुन जस्तो माछा समावेश, लालटेन, सजाया प्रशंसक,3सुन टोकन, एक बच्चा पान्डा र मानक कार्ड प्रतीक.
यो अन्य सुविधाहरू क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस खेल, निम्नानुसार छन्:
जंगली र स्क्याटर– यो खेल एक पांडा प्रतीक भनेर दुवै रूपमा स्क्याटर रूपमा साथै जंगली कार्य छ. यो पान्डा प्रतीक को रील मा अन्य सबै प्रतीक लागि विकल्प. तपाईं उनलाई एक साथ पाँच भेट्टाउनुभयो भने तपाईं निःशुल्क spins संग पुरस्कृत गर्दै. तपाईं सम्म जीत एक मौका खडा 20 एक पंक्ति मा नि: शुल्क spins.
अतिरिक्त जंगली प्रतिक– निःशुल्क राउन्ड spins समयमा अतिरिक्त जंगली pandas देखा गरिरहन. तिनीहरूले रील बाहेक anyplace निस्कनु गर्न सक्नुहुन्छ 1 र आफ्नो विजेता संभावना वृद्धि. के तपाईं पर्याप्त पांडा छरिन्छ पाउन सक्षम छन् समय सम्म सुविधा retrigger गर्न सक्षम हुनेछ.
पान्डा Pow सबै यसको लागि जाँदै छ, ठूलो एनिमेशन, सरल नियमहरू र खेल भर लुकेको रोचक नगद पुरस्कार भूल. यो क्यासिनो कुनै जम्मा बोनस खेल सबै जटिल छैन जो त्यो अत्यन्त शुरुवात-मैत्री बनाउँछ.